အလင်းရောင်ကြယ်များ: ကွန်ပျုတာတွင်Windows explorer has stopped working..ဆိုပြီးတော့.တက်လာတာကို ဖြေရှင်းနည်း နှစ်နည်း
အထက်ပါ ပရိုဂရမ်တစ်ခုတက်လာပါတယ် ဥပမာပေါ့ နော် mp4 လေဒီဂါဂါသီချင်းလေးအား ဖွင့် လိုက်ရာ
အထက်ပါ ပရိုဂရမ်တာက်လာပြီး ဆက်လက်ဖွင့် ပါက ဝင်းဒိုးတန်းကျသွားသည် ။အခြားအရာများစမ်းသပ်ရာလည်း ထိုကဲ့ သို့ ဖြစ်၍နေသည်..ရန်ကုန်မြို့ ရှိ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းမှ ဆားဗစ်စင်တာများသွားပြရာ မည်သူမျှအတိကျမလုပ်နိုင်ခြင်း ။ဝင်းဒိုးဖော်မက်ချရမည် ၃ဆိုင်လောက်ခန့်ထိုကဲ့ သို့ ပြောပြအချိန်သာကုန်ခဲ့ ရပါသည်။စက်စမ်းသပ်ခလည်း၅ထောက်နီးပါးပေးရပြီး ပိုက်ဆံနှမျောလို့ မဟုတ်ပါ...ဒီကြားထဲမှာ
မရေမရာ ဆော့ ဖ်ဝဲလ်များတင်ပေးလိုက်သည်။အားနာမျှ၍သာ ပြန်လာခဲ့ ပြီး ရီချင်စိတ်ပေါက်နေသည်
မြန်မာပြည်က ဘယ်လိုကဘယ်လို လုပ်ပြီးပြင်စားနေလည်းမသိ အနူတောလူချော မဖြစ်စေရန် မတော်လို့ ကွန်ပျုတာပညာနှင့် နိုင်ငံခြားမှာလာလုပ်စားယင် လေ့ လာဘို့ အများကြီးရှိပါသေးတယ်လို့ 
တစ်ခါတည်းမှာလိုက်ပါရစေ နို့ မို့ ...သိပါတယ်ဒီကလူတွေကအတိကျတွေပါ၊
ကိုဂေါ်လီထံကို မေးဖြင့် ချက်ခြင်းလှမ်းမေးလိုက်ရာ...
ငါတို့ တွေလည်းဒီမှာ ခနခနကြုံရတယ် ကွန်ပျုတာတိုင်းလိုလိုပဲ Memory Stick မှာအွန်လိုင်းကနေဆော့ ဖ်ဝဲလ်တွေ အဖုံဖုံကူးယူသိမ်းထားယင်း အခြားသော ကွန်ပျုတာများတွင်တပ်ဆင်အသုံးပြုသောအခါ သူတို့ စက်တွေမှ Trojan - Malware Virusတွေရှိနေတာတွေ ကပ်တွယ်ညှိပါလာခြင်းဖြစ်ပြီး မိမိစက်တွင် ပြန်လည်တပ်ဆင်အသုံးပြုသောအခါ
ယခုကဲ့ သို့ ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပြီး.မိမိစက်မှာ ပိုက်ဆံနှင့် ကာကွယ်ပေးထားသော Anti Virus သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေခြင်း Update ဆက်မလုပ်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်တပ်လေ့ ရှိတာတွေသိရှိရပါတယ်
ကိုကြောင့် ကိုဂေါ်လီမှ သူဖတ်ရှု့ မိသောစာအုပ်ထဲမှနည်းပညာပေးပို့ လိုက်ပြီးအဆင့်ဆင့် ပြုလုပ်ရာ
အောင်မြင်ခဲ့ ၍ အခုမလေးရှားကိုပြန်ရောက်တဲ့ အခါ ဒီနည်းလေးကိုလာရောက်တင်ပြသွားပါတယ်
Registry ထဲမှာ ၀င်ပြင်မှာဆိုတော့ ..Window+R ကိုနှိပ်ပြီး. regedit ကိုရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ..
စာအတိုင်းအဆင့် ဆင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါ
Computer သုံးနေရင်းနဲ့....Box တစ်ခုတက်လာတယ်.......
Windows explorer has stopped working..ဆိုပြီးတော့.........
ကျွန်တော်ပထမနည်းဖြစ်တဲ့.Registry Editor ကနေ ဖြေရှင်းနည်းကိုပြောပြပေးသွားပါ့မယ်........
Editor ပေါ်လာရင်တော့ HKEY_LOCAL_MACHINE ကိုသွားပါ...
ကျွန်တော် မြှားပြထားတဲ့ အတိုင်း အဆင့်ဆင့်သွားလိုက်နော်...
Window အောက်က Current Version.....နောက်...Explorer...........
Explorer အောက်က Browser Helper Objects ကို
Right Click နှိပ်ပြီး Delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Yes....... Okie Dokie ပေ့ါဗျာ......
ပြီးရင် စက်ကို Restart တစ်ခေါက်ချပေးလိုက်......
အဲ့ဒီ Box ကြီး တွေ့ချင်ပါတယ်ဆိုတာတောင် မတွေ့ရဘူး.... :)
နည်းကတော့ တိုပေမဲ့ တန်ဘိုးရှိတယ်......
မင်္ဂလာပါရှင် မနွယ်နီထွန်း ခေတ္တမလေးရှား သတင်းနှင့် နည်းပညာ..
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/17/2013 01:08:00 am